ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): October 2007
အခုရက်ပိုင်းလေး ကျွန်မ တအားအလုပ်များသွားတာရော ၊ စလုံးရဲတွေက ကွန်ပြူတာသိမ်းသွားပြီးနောက် အိမ်မှာ ကျန်ရှိတဲ့ ကွန်ပြူတာခပ်စုတ်စုတ်ကလေးတစ်ခုကို ပြန်ပြင်ပြီး အခုလိုစာတွေဆက်ရေးနေချိန်မှာ စက်ကလေးက ချူချာသွားတာရောပေါင်းပြီး အွန်လိုင်းနဲ့ခေတ္တဝေးသွားတာပါ ။ စာဖတ်သူများ စောင့်ဆိုင်းရခြင်း ၊ စိတ်ပူရခြင်းများအတွက် အားလုံးကို ဆောရီးပါရှင် .. ။ ရဲနဲ့ နောက်ဆုံးဆက်သွယ်စကားပြောပြီးချက်အရ ကျွန်မက ကျွန်မကွန်ပြူတာကို သိမ်းချင်သလို လာသိမ်းသွားခြင်းကို မီဒီယာနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး စာရေးရလိမ့်မယ်လို့ စင်္ကာပူရဲတွေကို ပြောလိုက်ပါတယ် .. ။ သူတို့က ကျွန်မရဲ့ ကေ့စ်ကို သိပ်မဝေးခင်မှာ အကြောင်းပြန်တော့မှာမို့ စောင့်ဆိုင်းပေးဖို့ တောင်းဆိုတဲ့အတွက် ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကလဲ မိဘတွေကို စိတ်သိပ်မပူစေချင်တာမို့ သည်းခံပေးလိုက်ပါတယ် .. ။ ကျွန်မသတ်မှတ်ထားတဲ့ deadline မကျော်ခင်အထိပေါ့။
လည်ပတ်နေတဲ့ ရာသီစက်ဝန်းကြီးက ၀ါလကင်းလွတ်သီတင်းကျွတ်အချိန်ကို ဆောင်ယူခဲ့ပြန်လေပြီ .. ။ ပြတင်းတံခါးမှ နှုတ်ဆက်လာသော လေပြနုနုလေးနှင့်အတူ ဆောင်းရာသီလေးကလည်း စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့လေပြီ .. ။ ကြည်လင်သော ရီသံချိုချိုလေးများဖြင့် တူနှစ်ကိုယ်လက်တွဲရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေသော စုံတွဲများ ၊ ကုသိုလ်ကောင်းမှုအတွက် ပြင်ဆင်နေကြသော လူကြီး လူငယ်များဖြင့် သာယာဖွယ် လတစ်လ စင်စစ်ပင်ဖြစ်ပါသည် .. ။
မြတ်စွာဘုရားက တာဝတိံသာနတ်ပြည်မှာ နတ်သားဖြစ်နေသော မယ်တော်မိနတ်သားကို မွေးကျေးဇူးဆပ်သည့်အနေဖြင့် ၀ါတွင်းသုံးလပတ်လုံး အဘိဓမ္မာ (၇)ကျမ်းကို ဟောကြားပြီး သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့မှာ လူ့ပြည်ကို ပြန်လည်ဆင်းသက်လာချိန်မှာ လူများက မြတ်စွာဘုရားကို ဆီမီး အမွှေးနံ့သာများထွန်းညှိကာ ပူဇော်ကြခြင်းဖြင့် သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲတော် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည် .. ။
လမ်းမထက်မှာ ပျော်ရွှင်နေသော ကလေးငယ်များ ၊ မိဘနှစ်ပါးဖြင့် သီတင်းကျွတ်အလှကို ခံစားလမ်းလျှောက်နေသော မိသားစုဝင်များ ၊ စည်ကားနေသော ဈေးတန်းများဖြင့် မြန်မာတို့ဧ။် ယဉ်ကျေးမှုကို ဖော်ပြနေသော သီတင်းကျွတ်လကို ကျွန်မ မြတ်နိုးသည် .. ။
စည်းလုံးမှုများ ၊ အပျော်များ ပါဝင်နေသော မီးပုံပျံများကို လူငယ်များက ပျော်ရွှင်စွာ လွှတ်တင်လိုက်ကြချိန်မှာ ကောင်းကင်တစ်ခွင်မှာ မီးရောင်စုံများ လင်းလက်တောက်ပနေမှာ အမှန်ပင် .. ။ မြို့ကြီး မြို့ငယ်အလိုက် စည်ကားအသက်ဝင်နေသော စေတီများမှ ပျံ့လွင့်လာသော ခေါင်းလောင်းသံများ ၊ ဘုရားရှိခိုးသံများက သာယာနာပျော်ဖွယ်ကောင်းလှသည် .. ။ ဘာသာခြားများအနေနှင့်လည်း မိမိဘာသာ မဟုတ်သည့်တိုင် သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ သီတင်းကျွတ်ဆီမီးအလှကို ဆင်နွှဲနေပုံကလည်း ရင်မှာ အေးမြလှသည် .. ။
အတွေးထဲမှ လှပဖွယ်ခံစားချက်များကို တလွင့်လွင့်ခံစားနေခိုက် ပစ္စုပ္ပန်ကို ကျွန်မပြန်ရောက်လာချိန်မှာ ဆီမီးများကင်းဝေးနေသော ခြင်္သေ့ကျွန်းအလှကိုသာ မြင်ရသည် .. ။
အလှမ်းဝေးနေသော အမိမြေကို လွမ်းဆွတ်မှုဖြေဖျောက်သည့်အနေနှင့်ရော ၊ ရှိတဲ့ကုသိုလ်လေးကို ကြိုးစားယူတာပါ ပေါင်းပြီး ကျွန်မ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ညနေမှာ စင်္ကာပူတိုပါးရိုးဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ပြုလုပ်တဲ့ သိမ်ဇင်းလောင်းပွဲကို သွားရောက်ခဲ့ပါတယ် .. ။
ယဉ်ကျေးတဲ့ ၀တ်စုံလေးတွေနဲ့ ကျား မ လူကြီး လူငယ်အားလုံး စုံစုံညီညီတက်ရောက်နေရာယူနေကြတာကို တွေ့ရချိန်မှာ ရင်ထဲ အေးမြခဲ့ရပါတယ် .. ။
ဘုန်းဘုန်းတွေကို လှူဖွယ်ပစ္စည်းများ လောင်းလှူပြီး ကျွန်မ ပြန်လာခဲ့ချိန်မှာ ရင်ထဲမှာ တစ်ခုခု လိုအပ်နေသလိုပါပဲ။
Posted by LIN LET KYAL SIN at 1:18 PM0comments Links to this post
Labels: Festivals, Lin Let Kyal Sin
Women sending panties to Myanmar embassies in protest
ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သတ် ကျွန်မစိတ်ထဲဖြစ်ပေါ်လာတာ ရေးသင့်လား ၊ မရေးသင့်လား တော်တော်လေး စဉ်းစားနေမိတယ် .. ။ နောက်တော့ ရေးမယ်ကွာ .. ဘာဖြစ်လဲ .. ဆိုပြီး စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်တယ် .. ။
အမိမြေ မှန်ကန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်ဖို့ ဘ၀တွေ အသက်တွေပေး တကယ်လုပ်နေကြသူတွေ ရှိတာကို ကျွန်မ သိပ်ပြီးလေးစားပါတယ် .. ။ အချို့ကတော့ တက်ကြွစွာ ကူညီသူ ၊ ပါဝင်သူ ၊ ဦးဆောင်သူတွေ .. ။ အချို့ကတော့ ထောက်ခံအားပေးသူတွေ ၊ ရင်ဖွင့်သူတွေ အစရှိသဖြင့် ကိုယ်နိုင်ရာပါဝင်ကူညီရင်း ဒီတိုက်ပွဲကြီးက ရှေ့ဆက်နေပါတယ် .. ။ ကန်ပိန်းတွေလည်း ကိုယ်နဲ့လက်လှမ်းမှီရာ လုပ်ကြ ၊ ရင်ဖွင့်သံတွေ ပြုလုပ်ကြ ၊ တကယ့်ထိရောက်စွာ လုပ်နိုင်ဖို့ စတင်လုပ်ကိုင်နေကြ …. တကယ်ကို စုံလင်လှပါတယ် .. ။
ကန်ပိန်းတော်တော်များများကို ကိုယ်တိုင်ထောက်ခံအားပေး ကျွန်မ သွားရောက်လေ့ရှိပါတယ် .. ။ အခုခပ်ဟော့ဟော့လေးဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကို ကျွန်မကို လူတွေက မြင်တိုင်း မေးနေကြတာ ကျွန်မလည်း ရှက်လွန်းလှပါတယ် .. ။
“လင်းလက်ရေ panties တွေ ပို့ပြီးပြီလား”တဲ့ .. ။
ဒါချည်းပဲ လာလာ မေးနေကြတယ် .. ။ သူများတော့ မသိဘူး .. ။ ကျွန်မတော့ အမေးခံရတိုင်း
စိတ်ထဲကသိကအောင့်ဖြစ်သလို စိတ်လဲတိုမိသလို ရှိန်းခနဲ ရှိန်းခနဲပဲ။
လူသားတိုင်း ၊ လူသားတိုင်းက မိမိစိတ်ထဲ ခံစားနေရတဲ့ မတရားမှုကို လွတ်လပ်စွာ ဖော်ကျူးခွင့်ရှိတာမို့ ကျွန်မက သိပ်ပြီးတော့ မပြောလိုပါဘူး .. ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ အားလုံးကို တစ်ခုပဲ အကြံပြုချင်ပါတယ်ရှင် .. ။
ကျွန်မတို့က ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာမိန်းကလေးတွေပါ .. ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ မဟုတ်တဲ့ အခြားဘာသာဝင် မြန်မာလူမျိုးတွေလဲ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကိုတော့ နားလည်သိရှိကြပါတယ် .. ။ ကျွန်မတို့က နအဖအစိုးရရဲ့ လူမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကြောင့် နှလုံးသားတွေလဲ ကွဲကြေနေရပါတယ် .. ။ ကျွန်မတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေသာမက အခြားလူမျိုးတွေကပါ ဘာသာတရားကို စော်ကားခြင်းကို ခါးသီးပြင်းရှစွာ ခံစားနေရပါတယ် .. ။ ကျွန်မတို့ ရင်ထဲမှာ နအဖရဲ့လုပ်ရပ်ကို ဘယ်လောက်ထိ မုန်းတီးစက်ဆုပ်သွားမလဲဆိုတာ ကျွန်မ ကောင်းကောင်း သိပါတယ် .. ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုက ညစ်ညမ်းမှုတွေ မဖြစ်သင့်ဘူး .. ။ ကျွန်မတို့ မိန်းမတွေက မိန်းမတွေ လုပ်နိုင်တဲ့ ပါဝါကို ပြတယ်ဆိုရာမှာ ညစ်ပတ်တဲ့အမည်ကြီး မဖြစ်သွားစေဖို့အတွက် အားလုံး သတိပြုဖို့လောက်ပဲ ကျွန်မ အကြံပြုပါရစေ .. ။
ကျွန်မတို့ မိန်းမတွေ လုပ်နိုင်တဲ့ အခြားနည်းလမ်းတွေ အများကြီးပါ .. ။ ကျွန်မက သံရုံးအသိုင်းဝိုင်းကို ကျဉ်ထားတဲ့ မိန်းကလေးပါ .. ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူ့ကိုမှ ရိုင်းစိုင်းစွာ မဆက်ဆံပါဘူး .. ။ သူတို့က နအဖရဲ့ အမှုထမ်းတွေဖြစ်ပေမယ့် သူတို့တွေက နအဖရဲ့ စစ်သားတွေ မဟုတ်ပါဘူး .. ။ သူတို့ဘက်က ကျွန်မ ဘက်လိုက်ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး .. ။ မဆိုင်တဲ့လူတွေကို သွားရမ်းတာမျိုး မဖြစ်စေချင်လို့ပါ .. ။
လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ ဆန္ဒကို ဖော်ထုတ်ပြခွင့်က လူသားတိုင်းရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်မို့ စင်္ကာပူ မြန်မာသံရုံးရှေ့မှာ ဟိုတစ်လောက ပြုလုပ်တဲ့ သံရုံးရှေ့မှာ ရေးချင်ရာရေးပြီး ကပ်ထားတဲ့ စာသားတွေကို ကျွန်မ ကန့်ကွက်ခြင်း မရှိသလို အားပေးခြင်းလည်း မပြောခဲ့ပါဘူး ။
ဒါပေမယ့် panties တွေပို့တယ်ဆိုတာကတော့ လူအချင်းချင်း အပြန်အလှန် စော်ကားခြင်းအဆင့်ကို ရောက်နေတဲ့အတွက် မသင့်တော်လှပါဘူး .. ။
စစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီစနစ်ကို လိုလားပြီး အားပေးထောက်ခံတဲ့ အာရှတိုက်က မိန်းမတွေရဲ့ လုပ်ရပ်က ဒီလိုကြီးလားဆိုပြီး သမိုင်းမှာ အမည်မကျန်ခဲ့ကြပါစေနဲ့ရှင် .. ။
ဖြည့်စွက်ချက် ။ ကျွန်မ ဒီစာကို သေသေချာချာ လေးရေးထားတာပါ ။ ပြင်းထန်စွာ ရှုံ့ချခြင်း သဘော လုံးဝ မသက်ရောက်မိအောင် စဉ်းစားရေးထားတာပါ ။ မြန်မာပြည်အတွက် စိတ်စေတနာရှိတဲ့လူမျိုးအားလုံးကို အသိမှတ်ပြုပါတယ် ။ အခုက ကျွန်မဘက်က ခံစားမှုကိုပဲ လွတ်လပ်စွာ ရေးထားတာပါ ။ ဒီလိုကန်ပိန်းမျိုးကို မကြိုက်ဘူး ကြိုက်တယ်ဆိုတာက စာဖတ်သူ သဘောပါ ။ ကျွန်မကတော့ ရှင်းရှင်းပဲ ။ စိတ်စေတနာကို အသိမှတ်ပြုတယ် ။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်တော့ အားမပေးဘူး ။ မကြိုက်ဘူး ။ လွတ်လပ်စွာ အမြင်ကွဲနိုင်ပါတယ် ။
ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်အတွက် ရင်ဖွင့်သံတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ထိရောက်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် ကြိုးစားမှုတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ဆုတောင်းပွဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ မကျေနပ်မှုကို ထုတ်ဖော်ပြသတဲ့ ခံစားချက်ပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံး တက်ညီလက်ညီ လုပ်ကိုင်ကြပြီး ညစ်တီးညစ်ပတ်လုပ်ရပ်တွေကိုတော့ နအဖလူတန်းစားတွေမရှောင်ပေမယ့် အမျိုးကောင်းသားသမီးပီသစွာ ကျွန်မတို့ ရှောင်ရှားကြပါစို့ .. ။
Posted by LIN LET KYAL SIN at 2:54 AM 11 comments Links to this post
ဒီစာသားတွေက ကျွန်မရဲ့ ချစ်ခင်လေးစားရသော မွေးစားဖေဖေ ( ကလောင်အမည် ကိုမွှေး ) ရေးသားသော ရင်ကိုထိမှန်သော စကားများဖြစ်ပါတယ် ။
Touching Words ဖိုင်နာမည်နဲ့ Yahoo Groups တွေကို ကျွန်မကိုယ်တိုင် ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ခြင်းပါ .. ။
စာဖတ်သူတို့ရဲ့ ရင်ကို တစ်နေရာကနေ လေးနက်စွာ ၀င်ရောက်သွားဖို့အတွက် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် .. .။
ကိုမျိုးချစ်မြန်မာဘလော့ခ်မှာ စကားဝိုင်းဖွဲ့ရင်း ရင်ထဲက ထွက်ကျလာတဲ့ ကျွန်မ မွေးစားဖေဖေရဲ့ ခံစားမှုသံစဉ်တွေကို အားလုံး ခံစားကြည့်လှည့်ပါအုန်းရှင် .. ။
Posted by LIN LET KYAL SIN at 12:59 AM 1 comments Links to this post
ပို့စ် ၂၀၀ကျော် နှင့် ဖြတ်သန်းခဲ့သောခြေလှမ်းများ
တကယ်တော့ ပို့စ် ၂၀၀ပြည့်တဲ့နေ့က ဒီစာတွေကို ရေးမလို့ပါ ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကျွန်မ မရေးဖြစ်ခဲ့ပါဘူး ။
ကျွန်မ ဒီဘလော့ခ်ကိုရေးတဲ့သက်တမ်းက ၁နှစ်ခွဲနီးပါးလောက် ရှိပါပြီ ။ အမြဲတမ်း စာတွေရေးချင်တဲ့ ကျွန်မ ဘလော့ခ်ဆိုတာကို စတင်မိတ်ဆက်တော့ သဘောကျတာနဲ့ စရေးဖြစ်ခဲ့တာပါ ။ အစပိုင်းတော့ ရင်ထဲရှိသမျှ ခံစားချက် အကြောင်းအရာအားလုံးရေးခဲ့ပါတယ် ။ ရေးရင်းနဲ့ ကျွန်မ အများဆုံးစိတ်ဝင်စားတာ ဖြစ်တဲ့ အမိမြေနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ခံစားချက်တွေချည်းပဲ ရေးဖြစ်လာတယ် ။
ကျွန်မ ဒီဘလော့ခ်ကိုစရေးတော့ အားပေးခဲ့သူ အတော်နည်းခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်မနဲ့ ပတ်သတ်ရာ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကတော့ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ အသဲအသန် တားခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သတ်တာ သီးသန့်ရေးတဲ့ ဘလော့ခ်ဆိုတာလည်း အတော်လေး နည်းပါတယ် ။ ကျွန်မ ဘလော့ခ်ကို ပထမဦးဆုံး လေးလေးစားစား အသိမှတ်ပြုပြီး အားလုံးရှေ့မှာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ထောက်ခံအားပေးခဲ့သူကတော့ ကိုငြိမ်းချမ်းရာ ဘလော့ခ်ပါ ။ ကျွန်မ မမေ့ပါဘူး ။ နောက် ကိုမြတ်မင်းဟန်တို့ ကိုသန့်ဇင်အောင်တို့ပါ ရောက်လာပြီး ကျွန်မ လိုအပ်တာရှိရင် ကူညီဖို့ သူတို့အားလုံး ပြောခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်မ ကျေးဇူးတကယ်တင်ပါတယ် ။
ကျွန်မ လင်းလက်ကြယ်စင်ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးက စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း နေထိုင်ပြီး ကိုယ်မှန်တယ်လို့ ခိုင်ခိုင်မာမာ ယုံကြည်ထားရင် အလျှော့မပေးတတ်တဲ့ ခေါင်းမာတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦးပါ ။ ကျွန်မ ဘလော့ခ်စရေးတုန်းက အသုံးအနှုန်းတွေက သိပ်ပြင်းပါတယ် ။ ကျွန်မ ငယ်တာလဲ ပါပါတယ် ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျွန်မအသက်က ၁၇နှစ်ကျော်ကျော်ပဲ ရှိပါသေးတယ် ။ နောက် ကျွန်မ အခုနဲ့ယှဉ်ရင် ဘလော့ခ်စရေးတုန်းက ဘာအတွေ့အကြုံမှ မရှိပါဘူး ။ ကျွန်မ အဲဒီအချိန်က ဒေါသဖြစ်ရင် ဖြစ်တဲ့အလျောက် အဲဒီအကြောင်းကိုရေးပြီး စကားလုံးဆိုရင် သုံးတာ ပြင်းပါတယ် ။ ဒါတွေက ကျွန်မ မမေ့နိုင်တဲ့ အမှတ်တရတွေပါ ။ ကျွန်မ စာရေးတာ ပြင်းထန်တဲ့ စကားလုံးတွေသုံးတယ်ဆိုတာ ကျွန်မပေါက်ကွဲတာကြောင့်လည်း ပါပါတယ် ။ အဲဒါကို နောင်တရလားလို့ မေးလာရင် ကျွန်မ နောင်တ လုံးဝမရပါဘူးလို့ ဖြေမှာပါ ။ ကျွန်မက ကျွန်မဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ခြေလှမ်းတွေကို အမှားတစ်ခုလို့ ဘယ်တုန်းကမှ မယူဆမိသေးလို့ပါ ။ မနှစ်က နည်းနည်းရိုင်းချင်ရိုင်းမယ် .. ကျွန်မ မပြောတတ်ဘူး ။ ဒါပေမယ့် အချိန်နဲ့ခံစားချက်အပေါ် ဖြစ်ခဲ့တာတွေမို့ ကျွန်မကတော့ ကျွန်မသွားနေတဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ နောက်ဆုံးအချိန်အထိ ဘာတစ်ခုကိုမှ နောင်တတော့ ရမယ့်သူ မဟုတ်ဘူး။
နောက်ပိုင်းပေါ့ ကျွန်မဘလော့ခ်ကို ဖတ်သူပိုများလာတာတွေ ၊ လူကြီးတွေ အားပေးမှုတွေ ၊ ကျွန်မဆိုဒ်ကိုေ၇ာက်လာသူတွေ များလာချိန်မှာ ကျွန်မ အရေးအသားကို ကောင်းအောင် ပိုပြုပြင်လာခဲ့တယ် ။ ကျွန်မက အဲဒီအချိန်တုန်းက ချယ်ရီသစ္စာ ၊ သံလွင်အိပ်မက် ၊ မြန်မာပြည်သား အစရှိတဲ့ ဆိုဒ်တွေမှာ စာရေးနေပြီး ဒီဘလော့ခ်ကတော့ ကျွန်မ အများဆုံးအချိန်ပေးတဲ့ နေရာတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ် .. ။
ကျွန်မ ဟိုးငယ်ငယ်လေးကတည်းက အားရင်စာအုပ်တွေပဲ ဖတ်နေတာများပါတယ် ။ ဒီဘလော့ခ်ရေးတော့ ကျွန်မ မဖတ်ဖူးတဲ့ စာတွေပါ ပိုဖတ်ဖြစ်လာပါတယ် ။ စာအုပ်ရွေးခဲ့ဖူးတဲ့ ကျွန်မအကျင့်တွေက ဗဟုသုတပိုရနိုင်တဲ့ လိုင်းဘက်ပိုပြောင်းလာပါတယ် ။ ဆောင်းပါးတွေ ပိုဖတ်ဖြစ်လာပါတယ် ။ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းတွေကို လက်လှမ်းမှီသလောက် ရှာဖတ်ဖြစ်လာပါတယ် ။ ကျွန်မ ဒီဘလော့ခ်ကိုရေးတဲ့အတွက် ကျွန်မ ဘ၀မှာ အပြောင်းအလဲတွေ အများကြီး ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ် … ။
ကျွန်မ ဘလော့ခ်ကို private counter လေးတစ်ခု တပ်ကြည့်ပြီး နေ့စဉ် အလည်လာပတ်သူတွေကို ကျွန်မ ကြည့်ခဲ့ချိန်က ကျွန်မ အံ့သြသွားခဲ့ဖူးပါတယ် ။ ကျွန်မ ကြွားပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ရင်ထဲက စကားပါ ။ အံ့သြသွားတယ်ဆိုတာ ကျွန်မက လုပ်ချင်ရာလုပ်နေတာ စာဖတ်သူတွေ နားရောခံသာကြရဲ့လားလို့ တွေးမိသွားလို့ပါ ။ ကျွန်မက အများကြည်ဖြူဖို့ စာရေးခဲ့ခြင်း မဟုတ်ဘဲ ကျွန်မ ၀ါသနာပါတဲ့ စာရေးခြင်းပေါ်မှာ ခံစားချက်တွေကို စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း လွတ်လပ်စွာ လုပ်ချင်ရာ လုပ်ခဲ့တာပါ ။ အဲဒီရက်ကစပြီး ကျွန်မ နည်းနည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ဝေဖန်သုံးသပ်ပြီး ပိုရင့်ကျက်အောင် ကျင့်ကြံခဲ့ပါတယ် ။
ကျွန်မ အထင်ပေါ့လေ … ။ မနှစ်က ဒီဇင်ဘာမှာ ကျွန်မအသက် ၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်မ တော်တော်လေး ပြောင်းလဲသွားတယ် ။ ကျွန်မ အတွေးတွေကအစ ၊ ကျွန်မလုပ်ချင်တာတွေ ၊ အရေးကြီးတာနဲ့ အရေးမပါတာ ခွဲခြားစဉ်းစားလာတာတွေ ၊ အနာဂတ်အစီစဉ်တွေ အားလုံး အားလုံး ပြောင်းလဲသွားပါတယ် ။ ကျွန်မ အတွေးတွေ ၊ ကျွန်မ လုပ်တာကိုင်တာတွေ ၊ စဉ်းစားတာတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မူကြိုအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ကျွန်မ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူနေရင်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းကလည်း ကျွန်မ ပါဝင်ကူညီနိုင်တာတွေကို ကလောင်တံကိုလည်း ကိုင် ၊ ကိုယ်တိုင်လည်း ကြိုးစားထမ်းဆောင်ရင်း ကျွန်မခြေထောက်တွေ ခိုင်မာလာခဲ့ပါတယ် .. ။
ကျွန်မ ဒီဘလော့ခ်ကိုရေးရင်း အခက်ခဲတွေလည်း အများကြီး တွေ့ခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်မပိုစ်တွေ အဖျက်ခံရတာတွေ ၊ ကျွန်မနာမည်ကိုဖျက်သူတွေ စုံနေတာပါပဲ … ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ တစ်ယောက်တည်း ပြန်ရပ်တည်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်တွေတုန်းက စိတ်တိုခဲ့ဖူးပေမယ့် အခုအချိန်မှာ ပြန်စဉ်းစားရင် ကျေးဇူးတင်စရာပါ ။ ကျွန်မကို ဒုက္ခပေးသူတွေ များခဲ့လို့ ကျွန်မပိုမိုခိုင်မာလာတာပါ .. ။ အဲဒီအတွက် ဒီနေရာကနေ ကျွန်မကို ဒုက္ခရောက်အောင် လုပ်ခဲ့သူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ရှိမိပါတယ် .. ။
ဘလော့ခ်ရေးရင်းနဲ့ ကျွန်မ အရင်နဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် စိတ်ပိုတည်ငြိမ်လာပါတယ် ။ သည်းခံမှုအား ၊ ဝေဖန်ခံနိုင်မှုအားတွေကအစ ပိုခံနိုင်လာပါတယ် .. ။ မလိုအပ်တာတွေကိုလဲ ဘေးချိတ်တတ်လာတယ် ။ ဒါတွေက ကျွန်မရရှိတဲ့ အမြတ်တွေပါ … ။
တကယ်တော့ ကျွန်မ လုပ်နေတာတွေက သဲတစ်ပွင့်ပါ .. .။ ကျွန်မ သိတယ်ဆိုတာ တကယ်သိသူတွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် မူကြိုအဆင့်ပါ .. ။ ဒါပေမယ့် မပြောင်းလဲဘဲ တည်မြဲနေတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ ကျွန်မရဲ့ ရှေ့ဆက်နေတဲ့ ခွန်အားတွေပါ .. ။
ကျွန်မကို တကယ်အားပေးချစ်ခင်လေးစားတယ်ဆိုရင် ကျွန်မရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို အားလုံး မေတ္တာတရားနဲ့ ထောက်ပြပေးဖို့ ကျွန်မ တောင်းဆိုချင်ပါတယ် .. ။
ကျွန်မကို အစဉ်အမြဲအားပေးနေတဲ့ စာဖတ်သူတွေ ၊ ကွန်မန့်ရေးပေးသူတွေ ၊ မေးလ်မှ တစ်ဆင့် အကြံပြုပြောသူတွေအားလုံးကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ် ။ ကျွန်မ အများကြီး ပိုဆက်ကြိုးစားသွားမှာပါ .. ။ ကျွန်မကို ချစ်တဲ့ အားလုံးရဲ့ အချစ်တွေနဲ့ တန်ဖိုးထပ်တူညီမျှ ဖြစ်အောင် ကျွန်မ ဘက်စုံကနေ ကြိုးစားသွားမှာပါ ။
ကျွန်မ အသက်ရှင်နေသရွေ့ ကာလပတ်လုံးမှာ ကျွန်မက ဒီဘလော့ခ်နှင့်အတူ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာမဆို အမြဲခိုင်မြဲစွာ တည်ရှိနေပြီး ကျွန်မ နိုင်တဲ့တာဝန်မှန်သမျှကို သန့်စင်တဲ့ စေတနာနဲ့ ထမ်းဆောင်သွားမယ်ဆိုတာကိုလည်း အားလုံးကို လေးစားစွာ ပြောလိုပါတယ် .. ။
Posted by LIN LET KYAL SIN at 12:28 AM3comments Links to this post
Labels: True Feelings
ငိုရမှာတောင် အားပြတ်နေတယ် ။
ပြောချင်တာသာ ပြောကြပါစေတော့ ။
နင်းချေပြီးဆက်မသွားပါနဲ့ကွယ် .. ။
ငါ့နှလုံးသွေးတွေ မြေထပ်မကျပါရစေနဲ့တော့.. ။
Posted by LIN LET KYAL SIN at 12:13 PM2comments Links to this post
Labels: Poems, True Feelings
သပိတ်သွတ်ပွဲ (14th October )
မြန်မာပြည်မှာ စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းမှုကြောင့် ဆန္ဒပြပွဲအတွင်း အသက်ပေးသွားသူများကို သပိတ်ဆွမ်းသွတ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ ပြည်ပရောက် မျိုးချစ်မြန်မာများအဖွဲ့မှ တနင်္ဂနွေနေ့မနက် ၈နာရီခွဲ ၊ တိုပါရိုးဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ရေစက်ချအမျှပေးဝေခြင်း အခမ်းအနားကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် .. ။
ဆရာတော်တွေ မကြွလာခင်မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းအဆောက်အအုံဘေး ၊ ခြံဝန်းထဲမှာ မုန့်ဟင်းခါးဖြင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးပါတယ် ။
မနက် ၉ နာရီမထိုးခင်မှာ တရားနာယူရန်အတွက် ဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့ သုံးထပ်မှာ ပရိတ်သတ်အားလုံးက နေရာယူကြပါတယ် .. ။ သိပ်မကြာခင်မှာ ဆရာတော်သံဃာတော်များ ကြွရောက်နေရာယူပါတယ်။
ပရိတ်သတ်များက သြကာသ ဘုရားရှိခိုဖြင့် ကန်တော့ခြင်း ၊ ငါးပါးသီလ ခံယူဆောက်တည်ခြင်း ၊ ဆရာတော်များမှ ပရိတ်တရားတော်များ ချီးမြှင့်ခြင်း ၊ ဆရာတော်မှ တရားဟောကြားခြင်း နှင့် ရေစက်ချအမျှဝေခဲ့ကြပါတယ် … ။
မနက်၁၀နာရီခွဲလောက်မှာ ကျဆုံးသွားခဲ့ပြီးသော အာဇာနည်ရဟန်းရှင်လူ ကျောင်းသားပြည်သူအပေါင်းတို့ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ၁မိနစ်ခန့် အားလုံးက မတ်တပ်ရပ်ပြီး ငြိမ်သက်စွာ အလေးပြုခဲ့ကြပါတယ် .. ။
“သံဃာတော်တွေက အခု မြန်မာပြည်မှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြတာကို အချို့က ၀ိနည်းနဲ့မညီဘူးလို့ ပြောကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒါက မမှန်ကန်ပါဘူး ။ မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက လေးအင်္သေချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်း ကျင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့ရတာ သူတစ်ယောက်တည်း လွတ်ကျွတ်ဖို့အတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ လောကီမှာရှိတဲ့ လူသားတွေအားလုံးအတွက် မဟာကရုဏာနဲ့ တရားဟောကြားဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ် ။ မြတ်စွာဘုရားက လောကီရေးမှာ ပါပါတယ်။ နောက်ဆုံး မီးနေခန်းအထိတောင် ပါပါတယ် ။ အင်္ဂုလိမာလာသုတ်က မီးမဖွားနိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးများအတွက် မြတ်စွာဘုရားက ဟောကြားခဲ့ခြင်းပါ ။ လောကီအတွက် ဘာမှလုပ်ပေးဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင် မြတ်စွာဘုရားက သဗ္ဗေညုတဥာဏ်တော်ကို ရရှိပြီးချိန်မှာ ဥယျာဉ်တော်မှာ အိပ်နေဖို့ပဲ ရှိပါတော့တယ်”
“မင်းဆိုးမင်းယုတ်ရှိပြီဆိုရင် အရာအားလုံး မအေးချမ်းတော့ပါဘူး ။ ဒါကြောင့် မင်းဆိုးမင်းဆိုး ရှိခြင်းက ပြည်သူပြည်သားအားလုံးအတွက် လုံးဝမကောင်းပါဘူး”
“ဘုန်းဘုန်းတို့စကားတွေကို အားပေးထောက်ခံတယ်ဆိုရင် လက်ခုပ်မတီးပါနဲ့ ။ လက်ခုပ်တီးလိုက်ရင် စိတ်ထဲ၇ှိတာတွေတောင် ပျောက်သွားသလိုပဲ ။ သာဓုပဲသုံးကြိမ်ခေါ်ပါ”
အစရှိတဲ့ မိန့်ခွန်းတွေနဲ့ ပရိတ်သတ်ကို အောင်မြင်စွာ တရားဟောကြားနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ အစပိုင်းမှာ လက်ခုပ်သံတွေ ညံနေအောင်တီးနေပေမယ့် ဘုန်းဘုန်းတစ်ပါးက မိန့်ကြားပြီးချိန်မှာ အားလုံးက အေးချမ်းကြည်လင်စွာနဲ့ သာဓုသုံးကြိမ်ခေါ်သံက မိုးမြင့်ထက်မှာ ချမ်းမြေ့စွာထွက်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ် ။
တရားဟောကြားပြီးချိန်မှာ သံဃာတော်များ ပြန်လည်ကြွချီပါတယ် ။
ဘုန်းဘုန်းတွေ ပြန်လည်ကြွချီပြီးချိန်မှာ ပြည်ပရောက်မျိုးချစ်မြန်မာအဖွဲ့က အဖွဲ့ကြီးဖွဲ့စည်းရခြင်း ရည်ရွယ်ချက် ၊ ဦးတည်ချက်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားပါတယ် ။
ဒီအဖွဲ့ကြီးက စည်းစနစ်သိပ်ကျနပြီး အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံ ၊ အခြားလူများ ပါဝင်ကြတာကြောင့် အရမ်းလဲ အားရတက်ကြွဖွယ်တွေ့ရပါတယ် ။ လုပ်ပုံကိုင်ပုံ ၊ စီစဉ်ပုံအားလုံးက စည်းစနစ်သိပ်ကျတာမို့ ဒီလိုအဖွဲ့တွေကို အမြဲထောက်ခံအားပေးတက်ရောက်တဲ့ ကျွန်မရင်ထဲမှာ အတိုင်းမသိ ကြည်နူးဝမ်းသာမိသလို သူတို့တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေနောက်မှာ အမြဲရှိနေမှာပါ ။
နောက်ဆုံးအစီအစဉ်တစ်ရပ်အနေနဲ့ တက်ရောက်တဲ့ ပရိတ်သတ်အားလုံးက ညာဘက်လက်သီးကို ဆုပ် ၊ ဘယ်ဘက်နှလုံးသားထောင့်မှာ ကပ်လိုက်ပြီး သစ္စာပြုကြွေးကြော်သံကို အရှေ့က ခေါ်ပေးတဲ့ ကိုကျော်စိုးနောက်ကနေ ညီညွာစွာ ရွတ်ဆိုကြပါတယ်။
၁) ကျွန်ုပ်တို့သည် အမိမြန်မာနိုင် ငံ ၏ အေ၇းကို မိမိတို့ ကိုယ်ပိုင် အရေးကဲ့ သို့ အစွမ်း ကုန် ကြိုးပမ်းလုပ် ဆောင် မည် ဖြစ်ကြောင်း သစ္စာ ပြုပါသည်။
၂) ကျွန်ုပ်တို့သည် အာဏာရှင် စနစ်ပပျောက် ရေးအတွက် အသက် စွန့် တိုက်ပွဲဝင်သွားကြသော ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူများ၏ ကျေးဇူးသစ္စာ ကို အစဉ်အမြဲ သတိရပါမည်ဟု သစ္စာပြုပါသည်။
၃) ကျွန်ုပ်တို့သည် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ် ရေး နှင့် အခြေခံ လူ့အခွင့် အေ၇း များပြန်လည်ရရှိရေး အတွက် စစ်မှန်သော လှုပ်ရှား မှုမှန်သမျှ ကို အပြည့် အ၀ထောက်ခံ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟုသစ္စာပြုပါသည်.။
သစ္စာအဓိဌာန်ဆိုပြီးချိန်မှာ အားလုံးရင်ထဲလှုပ်ခတ်နေကြပြီး အသံလှိုင်းတွေကနေ ခံစားချက်တွေ ပေါ်ထွက်နေတာကို ကျွန်မရင်ထဲကနေ ခံစားသိရှိမိပါတယ် ။ သွေးထဲမှာ လည်ပတ်နေတာတွေက မခံချင်စိတ်တွေရော ၊ စာနာခြင်းတွေရော အားလုံးပြွတ်သိပ်နေခဲ့ပါတယ် .. ။
နိုင်ငံတော်သီချင်းကို တူညီစွာ ဆိုပြီးချိန်မှာ အခမ်းအနားကို အောင်မြင်စွာ ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ် ။ တက်ကြွတဲ့အဖွဲ့တွေကရော ၊ နေရာပေါင်းစုံက ရွှေမြန်မာတွေရော အများကြီး တက်ရောက်အားပေးကြတာ ၀မ်းသာမိပါတယ် ။ မြန်မာပြည်မှာ မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ သပိတ်သွပ်အခမ်းအနားတစ်ခုကို ဒီက လူတွေက အချိန်ကုန် ငွေကုန် အားလုံးအပင်ပန်းခံပြီး စာနာစွာ လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်း အများကြီးလေးစားမိပါတယ် ။
ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်သွားမယ့် အရာတွေ အများကြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုလည်း မီးမောင်းထိုးပြခဲ့တဲ့ ပြည်ပရောက်မျိုးချစ်မြန်မာအဖွဲ့ကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိမိပါတယ် ။
ပြည်ပရောက်မျိုးချစ်မြန်မာအဖွဲ့ကို အကြံပြုလိုပါက http://overseasburmesepatriots.com/ ဆိုဒ်တွင် မှတ်ချက်ရေးနိုင်ပါသည် ။
ဒါကတော့ အဲဒီနေ့က ကျွန်မသွားခဲ့တဲ့ပုံပါ ။ ကျွန်မဘလော့ခ်ကို အစဉ်အမြဲအားပေးနေသူများက ကျွန်မကို အခမ်းအနားတွေမှာ သေသေချာချာ လာနှုတ်ဆက်စကားပြော ၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်း ကျွန်မ ရင်ထဲ ၀မ်းသာပါတယ် ။ ကျွန်မကို အကြံပြုဝေဖန်သူများကိုလည်း လေးစားလျက်ပါ .. ။ အပြင်မှာမြင်ရင် အရင်ဓါတ်ပုံတွေထဲကနဲ့ မတူဘူး မမှတ်မိဘူးလို့ အများက သိပ်ပြောနေတဲ့အတွက် နောက်မှပဲ ပုံအသစ်တွေ ဖော်ပြပေးပါတော့မယ် ။ လောလောဆယ် မအားသေးလို့ပါ ။
Posted by LIN LET KYAL SIN at 11:26 PM0comments Links to this post
Labels: Lin Let Kyal Sin, News And Activities, Overseas Burmese Patriots
Posted by LIN LET KYAL SIN at 12:01 PM 1 comments Links to this post
မြေပေါ်ချပေးခဲ့ရတယ် .. ။
အလွမ်းတွေခြွေပေးခဲ့ရတယ် .. ။
မြောင်းထဲဆင်းရပ်ခဲ့ရတယ် .. ။
ငါပဲရှိပါတယ် .. ။
တစစီဖဲ့ခြွေခဲ့တာ … ။
ပြန်သတ်မိလိမ့်မယ် .. ။
Posted by LIN LET KYAL SIN at 8:16 PM2comments Links to this post
Inside Myanmar: The Crackdown - 10 Oct 07
Posted by LIN LET KYAL SIN at 9:38 AM0comments Links to this post
ဒီစာမူကို သံလွင်အိပ်မက်မှာ စာရေးလေ့ရှိတဲ့ မမခရေဖြူက ပို့ပေးလာတာပါ ။ သဘောကျတဲ့ စာမူလေးဖြစ်တာမိုိ့ စာပြန်စီပြီး စာဖတ်သူများကို လက်ဆင့်ကမ်း ဝေမျှလိုက်ပါတယ်ရှင် .. ။
Aug လအတွင်း ဆန္ဒပြသတင်းများကို စတင်ကြားရသည် ။ မစုစုနွေး ၊ ကိုထင်ကျော်တို့ကို အတင်းဆွဲတွန်းထုတ် ရိုက်နှက်၍ လူစုခွဲသော် သတင်းရုပ်ပုံများကို မြင်ရ ကြားရသောအခါ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသော်လည်း “သတ္တိကတော့ မသေးဘူးဟေ့ ၊ ဘာလုပ်လို့မှ ဘာမှမဖြစ်တဲ့ တိုင်းပြည်မှာ သွားလုပ်နေတယ်”ဟု ဝေဖန်ခဲ့ပါသည်။
စင်္ကာပူတွင် လမ်းလျှောက်ရန် ဆော်သြကြသောအခါ “ကြောက်တယ် မလိုက်ဘူး”ဟု ငြင်းဆိုသူများတွင် ကျွန်မတစ်ယောက် အပါအ၀င် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ လမ်းသွားလျှောက်သော သူငယ်ချင်းများ အစစ်အဆေးခံရသည်ဟု ကြားသိသောအခါတွင်လည်း ဖုန်းဆက်ပြီး “ငါပြောသားပဲ မလုပ်ပါနဲ့လို့ ။ ရှိတဲ့ ပီအာလေး ပြုတ်သွားလို့ မြန်မာပြည်ပြန်ရမှ နင့်ပထွေး နအဖက လေဆိပ်မှာ လာကြိုနေလိမ့်မယ်”ဟု ပြောခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေးသည် ကျွန်မနှင့် မပတ်သတ် ။ ပင်ပင်ပန်းပန်းရရှိခဲ့သော ယခုလက်ရှိအနေအထားတစ်ခုကို အထိခိုက်မခံနိုင် ဟူသော ကျွန်မခံယူချက်များသည် ၂၅ ရက်နေ့ထိသာ တာရှည်ခဲ့သည် ။
စင်္ကာပူစံတော်ချိန် ၅နာရီခွဲခန့်တွင် ကျွန်မအလုပ်များ လက်စသပ်နေစဉ် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီမှ ဖုန်းဝင်လာသည်။ ပစ်ကြပြီ ။ မြန်မာပြည်တွင် စစ်တပ်က ရဟန်းများ ၊ လူများအားလုံးကို သေနတ်နှင့် လိုက်ပစ်ကာ တုတ်များနှင့် ရိုက်၍ အများအပြားသေကြေကြသည်ဟူဧ။် ။ နားထင်မှ သွေးများ တဒိတ်ဒိတ် ခုန်လာသည်။ တကိုယ်လုံး လှည့်ပတ်နေသော သွေးများအတွင်းတွင် ဒေါသ ၊ ၀မ်းနည်းခြင်း ၊ ယူကြုံးမရ ဖြစ်ခြင်းတို့သည် အလုအယက် စီးမျောနေကြဧ။် ။ ကျန်ရှိနေသော အလုပ်ချိန် နာရီဝက်သည မစ္ဇျိမ ၊ ဘားမား တူဒေး ၊ ဘီဘီစီ ၊ ဆုံဆည်းရာ အစရှိသည့် ၀ဘ်ဆိုဒ်ပေါင်းစုံတွင် အချိန်ကုန်သွားဧ။် ။
နံနက်ရုံးလာချိန်တွင် ကျွန်မ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တစ်ဦးက စင်္ကာပူသတင်းစာလာပေး၍ နင့်တိုင်းပြည်အကြောင်း ပါတယ်ဟု အကြောင်းကြားထားဧ။် ။ ခေါင်းကြီးပိုင်း မျက်နှာဖုံးတွင် နေရာယူထားသော ကျွန်မတို့အစိုးရဧ။် အစွမ်းကုန်ပက်စက်ရမ်းကားပုံများသည် ကျွန်မအား နံနက်စောစောစီးစီး ဒေါသထွက်စေဧ။် ။ သတင်းစာ ဖတ်ပြီးချိ်န်တွင် စိုစွတ်နေသော ပါးနှစ်ဖက်က ကျွန်မဧ။် စိတ်ခံစားမှုအတိုင်းအတာကို သက်သေခံနေပါသည်။
ထိုနေ့မှစ၍ company တစ်ခုလုံးတွင် တစ်ဦးတည်းသော မြန်မာ ကျွန်မကိုမြင်တိုင်း “What Happen To Your Country” “Why monks are involved in politic” ဟူသော မေးခွန်းနှစ်ခုကို နေ့စဉ် ရင်ဆိုင်ရပါသည်။ ကျွန်မကလည်း ဖြစ်ပျက်ပုံနှင့် ရဟန်းများ ပါဝင်ရပုံကို ရှင်းပြရလွန်း၍ အာခေါင်တွေတောင် ခြောက်လာဧ။် ကျွန်မ ကွန်ပြူတာတွင် United ဟူသော ရဟန်းသံဃာနှင့် ပြည်သူလက်တွဲနေပုံကို Screen Saver အဖြစ် တင်ထားဧ။်။ MSM တွင် May we win stupid government ဟူ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသည်။ ၂၈ရက်နေ့တွင် အနီရောင်ဝတ်၍ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ဘုရားဝတ်ပြု ပရိတ်နာခဲ့ဧ။် ။ “ဘာလုပ်လို့ ဘာဖြစ်မှာမို့လဲ”ဟူသော အချိန် ကျွန်မအတွေးအခေါ်များသည် “ဘာဖြစ်ဖြစ် မဖြစ်ဖြစ် လုပ်သင့်တယ်ထင်ရင် လုပရမယ်”ဟု ပြောင်းလဲကုန်ဧ။်။
လူတော်တော်များများ ဤမေးခွန်းကို မေးကြသည်။ ပေါက်မည်သေချာမှ ထီထိုးမည်ဆိုလျှင် ထိုးဖြစ်တော့မည် မဟုတ်ပါ ။ ထီသည် ကံတစ်မျိုးတည်းနှင့်သာ သက်ဆိုင်သော်လည်း နိုင်ငံအရေးသည် ကံ ၊ ဥာဏ် ၊ ၀ီရိယ ၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှု ၊ ပါးနပ်လိမ္မာမှုတို့နှင့် များစွာသက်ဆိုင်သည် ။ ယခု လှုပ်ရှားနေသော လူများသည် “နိုင်ချင်သည် ၊ နိုင်ရမည်”ဟု ခံယူထားသော်လည်း “နိုင်မည်”ဟု မည်သူမျှ မပြောနိုင်ပါ ။ သို့သော် ထိုသူတို့ ဦးဆောင်ကြဧ။် ရဲရင့်စွာ ၊ စည်းကမ်းရှိစွာ “အမှန်တရားအတွက် စတေးခဲ့ဧ။် တယောက်တွန်းက မရွေ့ ၊ ပြိုင်တူတွန်းမှ ရွေ့သည်”ကို သတိပြုအပ်သည်။
ဟုတ်ကဲ့ ။ မည်သူမျှ အမိဝမ်းမှ ထွက်လာကတည်းက “နိုင်ငံရေး နိုင်ငံရေး”ဟု အော်ထွက်လာသည်ဟု မကြားဖူးပါ။ နိုင်ငံရေးလုပ်သူသည် သိပ္ပံပညာရှင်များကဲ့သို့ Born in talent လည်း မဟုတ်ကြပါ ။ မခံမရပ်နိုင်မှု ၊ အနစ်နာခံမှုများမှ ရပ်တည်မှု ခံယူချက်အဖြစ် ကူးပြောင်းသွားခြင်းသာ ဖြစ်ဧ။် ။ နအဖထောင်သည နေပျော်စရာကောင်းသည်ဟု တခါမျှ မကြားဖူးသောကြောင့် နိုင်ငံရေးကို popular ဖြစ်အောင်လုပ်၍ ထောင်ကျခံချင်သူများလည်း ရှိကြမည်မဟုတ်ပါ။ စိတ်မ၀င်စားသော သူများသည် နအဖလက်ထက်တွင် အထုတ်လိုက် အထည်လိုက် မျိုဆို့နေရသော မျက်စိနားများကို ပိတ်၍ ပါးစပ်နှင့်လက်သာ လှုပ်နေသည့် လူတန်းစားများ ဖြစ်ဧ်။ ကိုယ်တိုင်မပါဝင်ရဲသည့်တိုင် စိတ်ဝင်စားရမည် ။ အမှန်အမှား သိရမည် ။
မြန်မာပြည်သည် တို့တိုင်းပြည်ဖြစ်သည် ။ မလွှဲသာ၍ စွန့်ခွာခဲ့ရသော်လည်း ကျွန်မတို့သွေးများသည် မြန်မာ့သွေးများဖြစ်ပါဧ။် ထို့ကြောင့် “နိုင်ငံရေး စိတ်မ၀င်စား”ဟု ပြောမည်ဆိုလျှင် ငါဘယ်လိုလူစားမျိုး ဖြစ်သွားမည်လဲဟု အရင်စဉ်းစားသင့်သည် ။ ယခုရက်စက်ပစ်သတ်ရိုက်နှက်ခံနေရသော လူထုထဲတွင် သင့်မိဘ ညီအကိုမောင်နှမ ၊ သင့်ချစ်သူသာပါမည်ဆိုလျှင် “နိုင်ငံရေး စိတ်မ၀င်စားဘူး”ဟု သင်ဆက်၍ ပြောနိုင်မည်လော။
“အပြင်က ဟောင်မနေကြနဲ့ ။ သတ္တိရှိရင် ပြန်လာခဲ့”
ဤစာတမ်းကို ကျွန်မ မကြာခဏ ဘလော့ခ်များတွင် ကွန်မန့်များတွင် တွေ့ဖူးပါသည်။ ရေးသူသည် မြန်မာပြညထဲမှ ဆင်းရဲကျပ်တည်းမှုများကို ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခံစားနေရသူတစ်ဦး ဖြစ်နိုင်သလို နအဖတပ်မှ ရုရှားဗိုလ်ကြီး ၊ ဗိုလ်ကလေးများလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည် ။ ဟုတ်ကဲ့ ။ အနီးစပ်ဆုံး ဥပမာပြရပါလျင် ဘောလုံးပွဲများကို ကြည့်ပါ။ ဘောလုံးကန်သူများရှိသလို အားပေးသူများလည်း ရှိရပါသည်။ နင့်ဘာသာ လေ့ကျင့်ထားရရင် နိုင်မှာပဲ ။ အားပေးစရာ မလိုဟူသော ပရိတ်သတ်များ အပ်ကျသံ မကြားတိတ်ဆိတ်၍ ဘောလုံးသမားများသည် ကိုယ့်ဘာသာကစားသော ဘောလုံးပွဲများ ရှိပါသလော ။ အော်ကြ ဟစ်ကြ အားပေးကြဧ။် ။ သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက် အသံကုန်အော်ကြဧ။် ။ ရှုံးနေရာမှ ပရိတ်သတ်အားပေးမှုကြောင့် စိတ်အားထက်၍ အနိုင်ရလိုက်သော သာဓကများစွာရှိဧ။် ။ အားပေးသော ပရိတ်သတ်သည် ဘောလုံးကန်တတ်သူများ မဟုတ်ပါ ။ သို့သော် သူတို့သည် ကိုယ့်အသင်းနိုင်ရေးအတွက် အချိန်ကုန် ၊ ငွေကုန် အလုပ်ပျက်ခံ၍ လာရောက်ကြည့်ရှုကြခြင်းဖြစ်ဧ။် ။ ( ဘောလုံးပွဲလောင်းသည်များကို မဆိုလိုပါ ) ။
ထို့အတူ ကျွန်မတို့သည် ပြည်ပမှအားပေးဧ။် ။ ငွေကုန် အလုပ်ရှုပ်ခံ၍ ၀ါဒဖြန့်ဧ။် ။ အလုပ်ပျက် ကျောင်းပျက်ခံ၍ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုဖော်ဆောင်ဧ။် ။ ကျွန်မတို့ရနေသော ၀င်ငွေများသည် မြန်မာပြည်နိုင်ငံတော်အစိုးရ ရုံးများကဲ့သို့ ကိုရီးယားရုပ်ရှင်အကြောင်းလေးပြောလိုက် ၊ လက်သည်းနီလေးဆိုးလိုက် ၊ အတင်းလေး ပြောလိုက်နှင့် ရသောလခများ မဟတ်ပါ။ အလုပ်အချိန်အတွင်းတွင် အမှန်တကယ်လူအား ဥာဏ်အားစိုက်ထုတ်၍ တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် အလုပ်လုပ်ရဧ။် ။ တချို့ Work Permit သမားများဆိုလျှင် တနေ့လုံး အလုပ်လုပ်မှ $ 13 လောက်သာရဧ။်။ သို့သော် ကျွန်မတို့သည် ကျွန်မတို့ တိုင်းပြညအတွက် ၊ ဘာသာ သာသနာတော်အတွက် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူများအတွက် လှူဒါန်းရန် နောက်မတွန့်ကြပါ ။ ဤသည်မှာ ကျွန်မတို့ ထမ်းနိုင်သလောက် ကူထမ်းခြင်းသာဖြစ်၍ ပြည်ပမှ ဟောင်နေသည်ဟု မစွပ်စွဲသင့်ပါ။
သတ္တိရှိရင်ပြန်လာခဲ့ ဟူသည်ထက် မိုက်လျင် ပြန်လာခဲ့ဟူသည်က ပိုမှန်ပေမည် ။ သတ္တိရှိခြင်းနှင့် မိုက်ရူး၇ဲဆန်ခြင်းကို ကောင်းစွာခွဲခြားတတ်သင့်သည် ။ ကျွန်မတို့ မြန်မာပြညသို့ ယခုအချိန်ပြန်လျင် အခြေအနေဘာများ ပြောင်းလဲသွားမည်နည်း ။ ဆန္ဒပြလူအုပ်ထဲတွင် လူတစ်ယောက်တိုးလာသည်မှအပ (သို့) အဖမ်းခံရာ လူအုပ်ထဲတွင် လူတစ်ယောက်တိုးလာသည်မှအပ ပိုထူးမည်မဟုတ်ပါ ။ ပြည်ပမှ အလှူရှင်တစ်ဦး လျှော့သွားသည် ။ ၀င်ငွေကို မှီခိုစားသောက်နေရသောကြောင့် အလုပ်မရှိပါက ပြည်တွင်းတွင် ကျပ်တည်းသော မိသားစုတစ်ခုတိုးလာပါမည် ။ ပြန်ချိန်ရောက်လျှင် ပြန်လာခဲ့ကြပါမည် ။ ထိုအချိန်သည် ကြက်ခြေနီ ဦးထုပ်လေးဆောင်း၍ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် volunteer အနေလည်း ဖြစ်နိုင်ဧ။် လူမှုရေး ၊ ကျန်းမားရေး ၊ ပညာရေးများ ပြန်လည်ထူထောင်ရန် ကျွန်မတို့လို ပြည်ပအင်အားများ အမှန်တကယ် လိုအပ်မည်ပင်။ ထိုအချိန်သည် မဝေးသော ကာလတစ်ခုတွင် ရောက်ရှိလာမည်ဟု မျှော်လင့်မိပါသည်။
ကျွန်မငယ်ငယ်က ဘုရားမှန်မှန်ရှိခိုးပါလျက် ကံမကောင်း ။ မဟုတ်တာ လုပ်နေကြသူများတော့ ကံကောင်းကြသည် ဟု မကျေမနပ်ပြောသောကြောင့် ကျွန်မ အဘွားက ကျွန်မကို ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ် ပြောပြပါသည်။ ထိုပုံပြင်လေးမှာ
တခါက ရွာတစ်ရွာတွင် သစ်ခုတ်သမားတစ်ယောက်သည် တောထဲတွင် သစ်ခုတ်သွားစဉ် အလေးသွားချင်၍ ချုံတခုထဲဝင်ကာ သွားခဲ့သည် ။ ကိစ္စပြီး၍ သစ်ရွက်များနှင့် ဖုံးရန်ကြည့်လိုက်သောအခါ စွန့်ထာသော မစင်များသည် ပကတိရွှေသားများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနေပါဧ။် ။ ထိုသတင်းသည် သစ်ခုတ်သမားနေသော ရွာကလေးတွင် တမဟုတ်ချင်း ပျံ့နှံသွားရာ လူအများလာရောက်၍ ခြုံနွယ်များကို ရှင်းလင်းကြဧ။်။ ရှင်းလင်းပြီးသောအခါ မစင်စွန့်ရာ နေရာသည် မြေကြီးထဲသို့ တ၀က်တပျက်မြုပ်နေသော လျောင်းတော်မူ ရှေးဟောင်းဘုရားတော်ကြီးဧ။် ဦးခေါင်းပေါ်တွင်ဖြစ်နေဧ။် ။ လူအများသည် ဘုရားဦးခေါင်းတော်ပေါ်တွင် မလုပ်သင့်ဟု မစဉ်းစားကြတော့ဘဲ ရွှေရလိုဇောနှင့် အပြိုင်အဆိုင် မစင်စွန့်နေကြရာ ထိုနေရာတွင် မစင်စွန့်သူများနှင့် စည်ကားနေဧ။် ။ ရွာစွန်တဲကလေးတွင်နေသော အဘိုးအို ၊ အဘွားအိုလင်မယားသာ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လျက် ဘုရားဦးခေါင်းတော်ပေါ် မစင်မစွန့်ဝံ့ဟုဆိုကာ မလာခဲ့ပါပေ။
ရွှေများရောင်းရငွေဖြင့် ရွာကလေးမှာ နေ့ချင်းညခြင်း ပြောင်းလဲလာဧ။်။ အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းများ အပြိုင်အဆိုင်ဆောက်ကြ၍ ပြိုးပြိုးပျက်ပျက်များ ၀တ်ဆင်ကာ အထူးပျော်မြူးနေကြဧ။်။ ပင်ပန်းစွာ ခြံစိုက်စားရသော အဘိုးအိုလင်မယားကိုလည်း တုံးလှ အလှသည်ဟု ပျက်ရယ်ပြုကြသည်။ ထိုဖြစ်ရပ်သည် တလကျော်မျှ ကြာရှည်သွားသည်။ တစ်ညတွင် မိုးကာလ မဟုတ်ပါဘဲ လေပြင်းမုန်တိုင်း အကြီးအကျယ် တိုက်ခတ်၍ ရေများလျှံကာ ရွာကလေးကို ၀ါးမြိုတိုက်စားသွားဧ။် ။ ထူးဆန်းစွာပင် အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းများ အားလုံးရေတွင်ပါ၍ အခြေမခိုင် ယိုင်နဲ့နဲ့နှင့် လယ်စွန်တဲကလေးသာ ကျန်ရစ်ဧ။် ။ မုန်တိုင်းစဲသော နောက်တစ်နေ့နံနက်တွင် တရွာလုံးတွင် တဲတစ်လုံးသာ ကျန်ရစ်ခဲ့တော့ဧ။် ။
ဤသည်မှာ ဖြစ်ရပ်မှန်ဟု သက်သေပြစရာမရှိသော်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာပီပီ ကပ်ဆေးသည်ဟူသော ကံကံဧ။် အကျိုးကို ကျွန်မယုံကြည်ပါဧ။် ။
ကျွန်မသည် အိမ်မှ ဘုရားစင်ရှေ့တွင်ထိုင်ကာ မေတ္တာသုတ်ရွတ်ဆို၍ သန်းရွှေနှင့် မောင်အေးပုံကို မြင်ယောင်ပါသည် ။ မေတ္တာမရှိသူကို မေတ္တာပို့ရသည်မှာ အလွန်ခက်ခဲသော အလုပ်ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ငိုမှန်း ရယ်မှန်း ခန့်မှန်းရခက်သော အကြောအခြင်များ တင်းနေသည့် ထိုသူနှစ်ယောက်ဧ။် မျက်နှာများကို ပြုံးနေသည်ဟု မှန်းဆမြင်ယောင်ရသည်မှာ အခက်ခဲဆုံးဖြစ်ဧ။် ။ သို့သော် ကျွန်မတို့လုပ်ရမည် ။ ကျွန်မတို့ တိုင်းပြည်အတွက် ၊ လူမျိုးအတွက် ၊ ဘာသာ သာသနာတော်အတွက် မေတ္တာပို့ကြရမည် ။
ထင်မြင်ချက် ( တတ်သလောက်ပါ )
ယခုအချိန်တွင် မောင်အေး (သို့) တခြားခပ်ကြီးကြီးတစ်ယောက်က ပြည်သူရဟန်းတို့နှင့် ပူးပေါင်းလိုက်လျင် ထိုသူသည် အလိုလိုကျေးဇူးရှင် စာရင်းဝင်သွားမည် ။ ကမ္ဘာတွင် နာမည်ကောင်းရမည်။ နိုင်ငံကို အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုမှ ပါဝင်နိုင်မည် ။ စောမောင်လို ရူးသေရခြင်း ၊ ခင်ညွန့်လို ပက်ပက်စက်စက် အဖမ်းခံရခြင်းများမှ ကင်းလွတ်မည်။ ဤအခွင့်အကောင်းကို အသုံးချသင့်သည်။ စစ်သားများသည် မပစ်နိုင်ဟု ပြော၍ ထောင်ထဲဝင်မည့်အစား ပစ်မည်ဟု ဟန်ဆောင်ထွက်၍ လူထုနှင့်ပူးပေါင်းသင့်သည်။ လူများသည် လက်သာ ကိုယ်ကျွတ် အရိုက်ခံရမည့်အစား လက်နက်များအိမ်တွင်ဆောင်ထား၍ ပြန်လည်ခုခံသင့်သည်။
မှတ်ချက် ။ စကားလုံးအချို့ကို လင်းလက်မှ ပြုပြင်မွမ်းမံထားသည် ။
Posted by LIN LET KYAL SIN at 1:25 PM5comments Links to this post
အချစ်နဲ့ပတ်သတ်ရင် ယုန်ငယ်တစ်ကောင်ပါ ။
အစကတည်းက ငါရှုံးနေတာပါ .. ။
ကျေးဇူးပြုပြီး ငါ့ကိုငိုခွင့်ပေးပါ … ။
Posted by LIN LET KYAL SIN at 9:00 PM0comments Links to this post
International Burmese Movement Day 6-Oct-2007
စနေနေ့ နေ့လည် ၂နာရီမှာ စင်္ကာပူက တက်ကြွတဲ့ မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်များအဖွဲ့က ဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆုတောင်းခြင်း ၊ အမှာစကားပြောကြားခြင်း အခမ်းအနားတစ်ခုကို Singapore Excelsior Hotel မှာ ကျွန်မ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ် .. ။
ခန်းမထဲကို ၀င်ဝင်လိုက်ချင်းပဲ အနီရောင်အများစုနဲ့ အဖြူေ၇ာင်တွေ ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ တက်ကြွတဲ့ ရွှေမြန်မာများစွာကို ကျွန်မ မြင်ရချိန်မှာ ရင်ထဲ ၀မ်းသာတာလား ၊ ၀မ်းနည်းတာလား ဘာမှန်းမသိတဲ့ ခံစားမှုလေး ဖြစ်သွားပါတယ် .. ။
နံရံမှာ ကပ်ထားတဲ့ ယနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ မြန်မာပြည်အခြေအနေ ပုံတွေ ၊ ဆောင်းပါးတွေက မြင်ရသူရင်ကိုနင့်စေပါတယ်။
နေရာယူပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အခမ်းအနား စတင်ပါတယ် ။ အခမ်းအနားကို ကျောင်းသားတစ်ဦးက စတင်ပြီး ခံစားချက်တနင့်တပိုးနဲ့ အမှာစကားပြောချိန်မှာ သူ့စကားလုံးတိုင်းက ကျွန်မရင်ကို နေရာပေါင်းစုံကနေ လာထိမှန်ပါတယ်။
“မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ၊ ကျွန်တော် ဒီနေ့ ဒီအချိန်မှာ ကြွရောက်လာကြတဲ့ မျိုးချစ်မြန်မာအားလုံးကို မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ဆက်လိုက်ချိန်မှာ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ အမိမြန်မာပြည်မှာ တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ သံဃာတော်တွေ ၊ ပြည်သူတွေအတွက်တော့ မင်္ဂလာရှိနေမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ တွေးမိလိုက်ချိန်မှာ ကျွန်တော့်စိတ်အစဉ်က အရမ်းကိုဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါတယ် ”
“ကျွန်တော်တို့က ဘယ်နိုင်ငံပဲရောက်ရောက် ၊ ဘယ်နေထိုင်ခွင့်ကိုပဲယူယူ ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့ရင်ထဲ သွေးထဲမှာ မြန်မာဆိုတဲ့ သွေးက အစဉ်အမြဲစီးဆင်းနေမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်” အစရှိတဲ့ စကားလုံးတွေကို ခံစားချက်ပြင်းထန်စွာ ပြောသွားချိန်မှာ အားလုံးရဲ့ ထောက်ခံအားပေးလက်ခံသံတွေနဲ့အတူ အားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာ ပြင်းထန်တဲ့ခံစားချက်တွေ ဖုံးလွှမ်းနေမယ်လို့ ကျွန်မထင်မြင်မိပါတယ် .. ။
သံဃာတွေတွေက တစ်ပါးပြီးတစ်ပါး ထင်မြင်ယူဆချက်တွေ ၊ ရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တာတွေကို ခံစားမှုနဲ့ထပ်တူ ပြောသွားချိန်မှာ ကျွန်မရင်ထဲမှာ အများကြီး ထပ်တူခံစားမိတယ် ။
“ဦးဇင်းတို့က နိုင်ငံတော်ကို ဘယ်သူအုပ်ချုပ်နေတယ် စိတ်မ၀င်စားပါဘူး ။ ဦးဇင်းတို့လိုချင်တာ စိတ်ဝင်စားတာ တစ်ခုက peace & justice ပါပဲ”
“အရှက်တရား အကြောက်တရား ကမ်းကုန်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အများကြီးဝမ်းနည်းခံစားမိပါတယ်”
“သာသနာကိုစော်ကားလွန်းတဲ့ ခွေးစုတ် ခွေးနာတွေ ခွေးလိုမကျင့်ဘဲ ဒေါင်းလိုကျင့်စေချင်ပါတယ်”
“လူတွေက ဘုန်းကြီးတွေ သပိတ်မှောက်တာ ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ဆိုင်လို့လား မေးတတ်ကြပါတယ်။ ပထမဦးစွာ ရှင်းပြလိုတာက သပိတ်ဆိုတာ လူနဲ့ဆိုင်တာလား ၊ ဘုန်းကြီးနဲ့ဆိုင်တာလား ဆိုတာပါပဲ”
“ဆရာလေးကတော့ နိုင်ငံရေးတွေ နားမလည်ပေမယ့် သတ်ဖြတ်သူတွေကိုတော့ တရားအရကြည့်မယ်ဆိုရင် သနားမိပါတယ် ။ ငရဲအိုးမှာ ကမ္ဘာတစ်သိန်းတိုင်အောင် ခံရမယ့် သူတို့က တကယ်တော့ သနားစရာပါ။ အခုအချိန်မှာ အရူးလက်ထဲ လက်နက်ရောက်နေသလို ဖြစ်နေတာမို့ အရူးကုနည်းကို ရှာရပါမယ် ။ အရူးကို နိုင်မယ့်နည်းလမ်းအတွက် အားလုံး စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ ဖွဲ့ပြီး ၊ အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ကြပါ ၊ ထိရောက်စွာ လုပ်ကိုင်ကြပါ”
အစရှိတဲ့ စကားတွေနဲ့ အခမ်းအနားကို အောင်မြင်စွာ ပြောကြားသွားပါတယ် ။ သံဃာတော်တွေနဲ့ ဆရာလေးတစ်ပါးရဲ့ ထိရောက်စွာ ပြောကြားချက်တွေကို ကျွန်မအပါအ၀င် လူထုကြီးက တခဲနက်ထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ် .. ။
နောက်အစီစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ ကျောင်းသားများကိုယ်စား ၊ အလုပ်သမားများကိုယ်စား အမှာစကားပြောကြားချိန်မှာလည်း အများကြီးရင်ထဲလှုပ်ခတ်မိပါတယ်။ အလုပ်သမားများကိုယ်စား ပြောကြားသွားတဲ့ အကိုကြီးက
“ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေ ပြည်ပကို ကျောင်းတက် အလုပ်လုပ်ဖို့လာတာနဲ့ အင်မီဂရေးရှင်းရောက်ရင် မျက်နှာလေးတွေက ဇီးရွက်လောက်လေးတွေ ဖြစ်ကုန်ကြရော” ဆိုတဲ့စကားကို အားလုံးက လက်ခုပ်သြဘာတွေ ညံနေအောင်တီးခဲ့ကြပါတယ် .. ။
အမှာစကားတွေပြောကြားပြီးချိန်မှာ အမိမြေမှာ ကျဆုံးသွားသော သူရဲကောင်းများအားလုံးကို လေးစားဂုဏ်ပြုဆုတောင်းတဲ့အနေနဲ့ မီးအမှောင်မှိတ်ပြီး ဖယောင်းတိုင်လေးတွေ ကိုင်ဆောင် ၊ ၁မိနစ်ခန့် ငြိမ်သက်စွာ ရပ်ကြရပါတယ် .. ။
မီးများပြန်ဖွင့်လိုက်ချိန်မှာ အားလုံးက ရင်ထဲကလာတဲ့ခံစားမှုတနင့်တပိုးနဲ့ နိုင်ငံတော်သီချင်း ၊ ကမ္ဘာမကြေဘူး သီချင်းတွေကို ဆိုချိန်မှာ ကျွန်မ ရင်ထဲ လှုပ်ခတ်သွားမိတယ် ။ ကျွန်မတို့ မြန်မာတွေ အရင်ကထက် ပိုပြီး စည်းကမ်းရှိလာတာကို တွေ့ရချိန်မှာလည်း သိပ်ဝမ်းသာမိပါတယ် .. ။
သံဃာတော်များနဲ့ အခမ်းအနားစီစဉ်သူတွေက စည်းကမ်းရှိဖို့ ၊ ၀ိုင်းဝန်းကူညီဖို့ ပြောကြားပြီး သံဃာတော်တွေက ပြန်ကြွသွားချိန်မှာ အခမ်းအနားက အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးသွားပါတယ် .. ။
တိုပါးရိုးဘုန်းကြီးကျောင်းကို ဆက်သွားဖို့ အစီအစဉ်တွေလည်း ရှိနေပါတယ် ။ တော်တော်များများ ဆက်သွားကြမယ်လို့ ကျွန်မထင်ပါတယ် ။ ကျွန်မက ပင်ပန်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အ်ိမ်ကိုပဲ အခမ်းအနားပြီးတော့ ပြန်လာခဲ့ပါတယ် ။
ဒီအခမ်းအနားမှာ မြန်မာတွေရင်ထဲမှာ မြန်မာ့သွေးတွေ ပိုပြီး တောက်ပြောင်လာအောင် ၊ စည်းကမ်းပိုရှိလာအောင် ၊ ပိုပြီးစည်းလုံးတတ်လာအောင် ၊ အားပေးတဲ့စကား ၊ ခံယူချက်စကားတွေကို ကျွန်မကြားသိပြီးချိန်မှာ ပိုပြီး စိတ်ထဲဝမ်းနည်း ၀မ်းသာ ဖြစ်သွားမိပါတယ် .. ။
ကျွန်မတို့အားလုံး ရတဲ့နေရာမှာ ရသလို ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ရမှာကို အများ ပိုသိလာအောင် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ ဒီအခမ်းအနားက လူကြီး လူငယ်တွေ ၊ ကြွရောက်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြတဲ့ သံဃာတော်တွေ အားလုံးကို ရင်ထဲမှ လှိုက်လှဲစွာ ကျေးဇူးတင်ရှိမိပါတယ်ရှင် .. ။
Posted by LIN LET KYAL SIN at 2:26 PM5comments Links to this post
Women sending panties to Myanmar embassies in prot...
The Time To Choose Your Family Now